ह्याङ्गओभरहरू रोक्न र राहत दिने बारे सुझावहरू-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
ह्याङ्गओभरहरू रोक्न र राहत दिने बारे सुझावहरू
व्हिस्की स्वादको लागि प्रत्येक पटक, हामीसँग यो प्रश्न छ: हामी कसरी ह्याङ्गओभरबाट बच्न सक्छौं?
टाउको दुखाइ, वाकवाकी, थकान, पेट दुखाइ, क्र्याम्प, इत्यादि, यी ह्याङ्गओभरका क्लासिक सीक्वेल हुन्। हामीलाई यो समस्या किन छ? किनभने व्हिस्की अल्कोहल एक तरल पदार्थ हो, यसले तपाईंको शरीरलाई निर्जलीकरण गर्नेछ! तल ह्याङ्गओभर सुझावहरूको लागि केहि छ, कृपया बिन्दुहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्:
1. व्हिस्की स्वादको समयमा, एक गिलास पानी पिउनको लागि खाली ठाउँको फाइदा लिनुहोस्
त्यो रात वा भोलिपल्ट ह्याङ्गओभरबाट बच्ने यो उत्तम तरिका हो, र यसले अल्कोहलको कारण हुने निर्जलीकरणलाई कम गर्न सक्छ।
2. राती सुत्नु अघि एक लिटर पानी पिउनुहोस्
यदि तपाईंले व्हिस्की चाख्दा पहिले नै पानी पिउनुभएको छ भने, सुत्नुअघि पानी पिउनुहोस्। जसले तपाईको शरीरको आर्द्रता भर्न मद्दत गर्न सक्छ। आफ्नो ओछ्यान नजिकै पानीको बोतल राख्नु राम्रो हुन्छ, किनकि व्हिस्की पिउनाले मानिसहरूलाई थप उथलपुथल सुत्ने गर्छ।
3. भोलिपल्ट बिहान भिटामिन र जिंक पूरक गर्नुहोस्
फलफूल र तरकारी खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मात्र होइन, भिटामिनको पूर्ति पनि हो । जुन भिटामिनले तपाईंलाई अल्कोहल तोड्न मद्दत गर्छ। तपाईं अधिक कच्चा कस्तूरी खान सक्नुहुन्छ, यसमा जस्ताले तपाईंको जीवन शक्तिलाई छिट्टै पुनर्स्थापित गर्न सक्छ। गाजरले तपाइँको कलेजोलाई फेरि उत्साहित बनाउन र कडा परिश्रम गर्न सक्छ!
4. अर्को दिन भरि पानी भर्न जारी राख्नुहोस्
यदि तपाईं पानी पिउन थाकेको हुनुहुन्छ भने, सूप वा हर्बल चिया पिउने प्रयास गर्नुहोस्, तर कफी सिफारिस गरिएको छैन। खानाको सन्दर्भमा, केरा वा सुन्तला जस्ता भिटामिन युक्त खानाहरू छनौट गर्नुहोस्। एक कप पानीमा बेकिंग सोडा मिसाएर पिउनाले पेट दुख्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
ह्याङ्गओभर राहत नुस्खा
घरमै बनाएको ताजा जुसमा भिटामिन ए र भिटामिन सी मात्र नभई खनिज र पानी पनि पाइन्छ। जुसरमा तलका केही फलफूलहरू राख्नुहोस्:
1 छिलेको सुन्तला
1 छिलका किवी
1/2 cantaloupe वा 1/4 तरबूज
1 /2केला
1/2 सानो काकडी
यसलाई जुसमा बनाउनुहोस्, यसलाई ठूलो कपमा खन्याउनुहोस्, केही आइस क्यूबहरू थप्नुहोस् र पिउनुहोस्। तपाईको लागि शुभकामना!
अघिल्लो: Mizuwari के हो?
अर्को: कुन अवसरमा कुन व्हिस्की पिउने?